Dɛn Na Ebetumi Aboa Yɛn Ma Yɛakura Nokwasɛm No mu Pɛpɛɛpɛ?
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | January 1, 2003
KENKAN WƆ Albanian Arabic Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Malayalam Marathi Myanmar Norwegian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Rarotongan Romanian Samoan Sepedi Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese
AGORU ho adwenkyerɛfo bi a ɔyɛ adwuma ma atesɛm krataa bi kɔhwɛɛ agoru bi bere bi. N’ani annye ho pii na ɔkyerɛw ho asɛm akyiri yi sɛ: “Sɛ adehunu bi na worepɛ ahwɛ a, ɛnde kɔhwɛ agoru yi ɔkwan biara so.” Akyiri yi, wɔn a wɔyɛɛ agoru no ho nhyehyɛe no faa asɛm bi fii nea agoru ho adwenkyerɛfo no kae no mu de tintim aguade ho dawurubɔ bi. Asɛm a wɔfa kae no ni: “Kɔhwɛ agoru yi ɔkwan biara so”! Aguadi ho dawurubɔ no faa agoru ho adwenkyerɛfo no nsɛm no kae pɛpɛɛpɛ de, nanso wɔde nsɛm no dii dwuma ɔkwan foforo so ma enti wɔnam so sesaa adwene a na ɛwɔ n’adwenkyerɛ no mu no.
Saa nhwɛso no kyerɛkyerɛ sɛnea nsɛm a ɛfa asɛm bi ho ho hia mu. Sɛ wɔfa nsɛm bi de di dwuma ɔkwan foforo so a, etumi kyinkyim ntease a ɛwom no, sɛnea Satan kyinkyim ntease a ɛwɔ Kyerɛwnsɛm no mu bere a ɔbɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛdaadaa Yesu no. (Mateo 4:1-11) Ɔkwan foforo so no, sɛ yɛde nsɛm a ɛfa asɛm bi ho di dwuma pɛpɛɛpɛ a, ɛboa ma yɛte asɛm no ase yiye. Eyi nti, sɛ yesua Bible mu asɛm bi a, nyansa wom bere nyinaa sɛ yɛbɛhwɛ nsɛm a ɛfa asɛm no ho no sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛte ade a na ɔkyerɛwfo no reka ho asɛm no ase yiye.
Di Ho Dwuma Pɛpɛɛpɛ
Nsɛm asekyerɛ nhoma bi kyerɛ nsɛm a ɛfa nsɛm foforo ho ase sɛ “asɛm bi a wɔakyerɛw anaa wɔaka no afã horow a edi asɛmfua anaa asɛm pɔtee bi anim anaa akyiri, a mpɛn pii no ɛboa ma wonya asɛm no mu ntease anaa nea ɛkyerɛ no.” Nsɛm a ɛfa asɛm bi ho nso betumi akyerɛ “nsɛm tebea anaa nokwasɛm ahorow a ɛfa asɛm anaa tebea pɔtee bi ne nea ɛkeka ho no ho.” Wɔ ntease a edi akyiri yi mu no, asɛm a ebetumi agyina hɔ ama “nsɛm a ɛfa asɛm bi ho” bɛyɛ “asɛm bi mu nokwasɛm.” Esiane asɛm a ɔsomafo Paulo kyerɛw kɔmaa Timoteo no nti, ɛho hia paa sɛ yebesusuw nsɛm a ɛfa kyerɛwsɛm bi ho no ho: “Bɔ mmɔden fa wo ho gyina Onyankopɔn anim sɛ nea ɔfata, sɛ odwumayɛni a enhia sɛ ɔfɛre, na okura nokwasɛm no mu pɛpɛɛpɛ.” (2 Timoteo 2:15) Nea ɛbɛyɛ na yɛakura Onyankopɔn Asɛm mu pɛpɛɛpɛ no, ɛsɛ sɛ yɛte ase yiye na afei yɛde nokwaredi kyerɛkyerɛ mu pɛpɛɛpɛ kyerɛ afoforo. Obu a yebenya ama Yehowa, Bible Kyerɛwfo no, bɛka yɛn ma yɛabɔ mmɔden ayɛ saa, na nsɛm a ɛfa asɛm bi ho a yebesusuw ho no bɛyɛ mmoa kɛse.
Timoteo Nhoma a Ɛto so Abien Ho Nokwasɛm
Sɛ nhwɛso no, ma yɛnhwehwɛ Timoteo Nhoma a Ɛto so Abien no mu nhwɛ. * Yebetumi abisa nhoma no ho nokwasɛm de afi yɛn nhwehwɛmu no ase. Hena na ɔkyerɛw Timoteo Nhoma a Ɛto so abien no? Ɔkyerɛw no bere bɛn? Tebea bɛn mu na ɔkyerɛw no? Afei yebetumi abisa sɛ, Na tebea bɛn na “Timoteo” a ne din da nhoma no so no wom? Dɛn nti na na ohia nhoma no mu nsɛm no? Nsɛmmisa yi ho mmuae a yebenya no bɛboa ma yɛanya nhoma no ho anisɔ kɛse na ama yɛahu sɛnea yɛn a yɛwɔ hɔ nnɛ no betumi anya so mfaso.
Timoteo Nhoma a Ɛto so Abien no nkyekyɛm a edi kan no kyerɛ sɛ nhoma no yɛ krataa bi a ɔsomafo Paulo kyerɛw kɔmaa Timoteo. Nkyekyɛm foforo da no adi sɛ bere a Paulo kyerɛwee no, esiane asɛmpa no nti na ɔda nkɔnsɔnkɔnsɔn mu. Esiane sɛ na nnipa pii agyaw Paulo nti, ɔtee nka sɛ na n’awiei abɛn. (2 Timoteo 1:15, 16; 2:8-10; 4:6-8) Enti, ɛbɛyɛ sɛ ɔkyerɛw nhoma no wɔ n’afiasenna a ɛto so abien wɔ Roma no mu, bɛyɛ afe 65 Y.B. Ɛda adi sɛ, ɛno akyi bere tiaa bi na Nero buu no kumfɔ.
Eyi ne Timoteo Nhoma a Ɛto so Abien no ho nokwasɛm. Nanso, ɛfata sɛ yɛhyɛ no nsow sɛ Paulo ankyerɛw Timoteo sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛka n’ankasa nsɛnnennen ho asɛm akyerɛ no. Mmom no, Paulo bɔɔ Timoteo kɔkɔ wɔ mmere a emu yɛ den a na ɛda n’anim no ho, na Paulo hyɛɛ n’adamfo no nkuran sɛ ɔmmma nneɛma nntwetwe n’adwene, na ɔnkɔ so ‘nyɛ den,’ na ɔmfa Paulo akwankyerɛ no mma afoforo. Na eyi yɛ bɛma saafo no afata ma wɔatumi aboa afoforo nso. (2 Timoteo 2:1-7) Ayamye mu a wofi susuw afoforo ho wɔ ahokyere mmere mu ho nhwɛso a ɛkyɛn so bɛn ara ni! Afotu pa a ɛwɔ hɔ ma yɛn nnɛ bɛn ara ni!
Paulo frɛɛ Timoteo “ɔdɔba.” (2 Timoteo 1:2) Wɔtaa bɔ aberantewaa yi din wɔ Kristofo Hela Kyerɛwnsɛm no mu sɛ Paulo hokafo nokwafo. (Asomafo no Nnwuma 16:1-5; Romafo 16:21; 1 Korintofo 4:17) Bere a Paulo kyerɛw krataa yi kɔmaa Timoteo no, ɛte sɛ nea na Timoteo wɔ ne mfirihyia 30 mu—na wɔda so bu no sɛ aberantewaa. (1 Timoteo 4:12) Nanso, na wayɛ nokwaredi mu nhwɛso pa dedaw, na na ‘ɔne Paulo asom’ bɛyɛ mfirihyia 14. (Filipifo 2:19-22) Ɛmfa ho sɛ na Timoteo yɛ aberantewaa no, Paulo maa no asɛyɛde sɛ ontu mpanyimfo afoforo fo sɛ ‘wonnnye akyinnye wɔ nsɛmfua ho’ na mmom wɔmfa wɔn adwene nsi nneɛma a ɛho hia te sɛ gyidi ne boasetɔ so. (2 Timoteo 2:14) Wɔmaa Timoteo tumi nso sɛ ɔmpaw asafo mu ahwɛfo ne asomfo. (1 Timoteo 5:22) Nanso, ebetumi aba sɛ na onni akokoduru wɔ sɛnea ɔde tumi a wɔde ama no no bedi dwuma no mu.—2 Timoteo 1:6, 7.
Ɔpanyin a na ɔyɛ aberantewaa no hyiaa ɔhaw ahorow bi a emu yɛ den. Ade biako ne sɛ, na nnipa baanu bi, “Himeneo ne Fileto” ‘redan ebinom gyidi abutuw,’ na na wɔrekyerɛkyerɛ sɛ ‘owusɔre atwam dedaw.’ (2 Timoteo 2:17, 18) Ɛda adi sɛ, wɔkyerɛkyerɛe sɛ na owusɔre biako a ɛwɔ hɔ no yɛ honhom fam de, nanso na Kristofo anya dedaw. Ebetumi aba sɛ na wɔde Paulo asɛm a ɛne sɛ na Kristofo awu wɔ wɔn bɔne mu na wɔnam Onyankopɔn honhom so ama wɔatra ase no redi dwuma wɔ ɔkwan foforo so. (Efesofo 2:1-6) Paulo bɔɔ kɔkɔ sɛ awaefo nkɛntɛnso a ɛte saa no benya nkɔanim. Ɔkyerɛwee sɛ: “Ɛbere bi bɛba a wɔrentie ɔkyerɛ pa a eye no, . . . Na wobeyi wɔn aso afi nokware ho, na wɔadan akotie anansesɛm.”(2 Timoteo 4:3, 4) Kɔkɔbɔ a Paulo dii kan de mae no daa no adi sɛ na ehia sɛ Timoteo tie ɔsomafo no afotu no.
Nhoma no So Mfaso Nnɛ
Yefi nea yɛaka ho asɛm dedaw no mu hu sɛ, anyɛ yiye koraa no, nsɛm a edidi so yi nti na Paulo kyerɛw Timoteo Nhoma a Ɛto so Abien no: (1) Ná onim sɛ n’awiei abɛn, na ɔhwehwɛe sɛ obesiesie Timoteo ama bere a onni hɔ a ɔbɛboa no no. (2) Na ɔpɛ sɛ osiesie Timoteo ma ɔbɔ asafo ahorow a na ɛhyɛ n’ase no ho ban fi ɔwae ne nkɛntɛnso bɔne ho. (3) Ɔpɛe sɛ ɔhyɛ Timoteo nkuran ma ɔyere ne ho wɔ Yehowa som adwuma no mu na ogyina Kyerɛwnsɛm a efi honhom mu no mu nokware nimdeɛ so ko tia atoro nkyerɛkyerɛ.
Nokwasɛm yi a yɛahu no ama Timoteo Nhoma a Ɛto so Abien no ayɛ nea mfaso kɛse wɔ so ma yɛn. Ɛnnɛ nso, awaefo a wɔte sɛ Himeneo ne Fileto, a wɔhyɛ wɔn ankasa nsusuwii ho nkuran, na wɔbɛpɛ sɛ wɔdan yɛn gyidi butuw no wɔ hɔ. Afei nso, “mmere a emu yɛ den” a Paulo hyɛɛ ho nkɔm no aba. Nnipa pii ahu nokware a Paulo kɔkɔbɔ no yɛ no: “Wɔn a wɔpɛ sɛ wɔde onyamesom pa tra ase Kristo Yesu mu nyinaa, wɔbɛtaa wɔn.” (2 Timoteo 3:1, 12) Yɛbɛyɛ dɛn atumi agyina pintinn? Te sɛ Timoteo no, ɛsɛ sɛ yetie wɔn a wɔde mfirihyia pii asom Yehowa no afotu. Na ɛdenam Yehowa dom so no, yɛnam kokoam adesua, mpaebɔ, ne Kristofo fekubɔ so betumi ‘akɔ so ayɛ den.’ Afei nso, ɛdenam ahotoso a yebenya wɔ tumi a nokware nimdeɛ wɔ mu so no, yebetumi atie Paulo afotu yi: ‘So nsɛm pa a eye no mu yiye.’—2 Timoteo 1:13.
“Nsɛm Pa a Eye”
Dɛn ne “nsɛm a eye” a Paulo kaa ho asɛm no? Ɔde asɛm no dii dwuma faa nokware Kristosom nkyerɛkyerɛ ho. Wɔ Paulo krataa a edi kan a ɔkyerɛw kɔmaa Timoteo mu no, ɔkyerɛkyerɛɛ mu sɛ “nsɛm a eye” no yɛ “yɛn Awurade Yesu Kristo nsɛm.” (1 Timoteo 6:3) Sɛ obi suasua nsɛm a eye no a ɛma n’adwenem da hɔ, onya ɔdɔ ne tema ma afoforo. Esiane sɛ Yesu som adwuma ne ne nkyerɛkyerɛ foforo a ɛwɔ Bible mu nyinaa hyia nti, yebetumi atrɛw asɛm a ɛne “nsɛm a eye” no mu ma aka Bible nkyerɛkyerɛ nyinaa.
Wɔ Timoteo ne Kristofo mpanyimfo nyinaa fam no, na nsɛm pa a eye no yɛ ‘ade pa a wɔde ahyɛ wɔn nsa’ a na ɛsɛ sɛ wɔbɔ ho ban. (2 Timoteo 1:13, 14) Na ɛsɛ sɛ Timoteo “pae mu ka asɛm no, gyina mu ɛbere a eye ne nea enye mu, yi ntɛn, ka anim, tu fo, abodwokyɛre ne ɔkyerɛkyerɛ nyinaa mu.” (2 Timoteo 4:2) Sɛ yehu sɛ na awaefo nkyerɛkyerɛ retrɛw wɔ Timoteo bere so a, yehu nea enti a Paulo sii hia a na ehia sɛ wɔkyerɛkyerɛ nsɛm a eye so dua no. Yehu sɛ na ɛsɛ sɛ Timoteo bɔ nguan no ho ban nso denam ‘ntɛnyi, animka, afotu’ wɔ abodwokyɛre ne ɔkyerɛkyerɛ pa mu so.
Henanom na na Timoteo bɛka asɛm no akyerɛ wɔn? Nsɛm a ɛfa asɛm no ho no kyerɛ sɛ sɛ́ ɔpanyin no, na Timoteo bɛka asɛm no wɔ Kristofo asafo no mu. Esiane asɔretiafo nhyɛso nti, na ɛsɛ sɛ Timoteo kɔ so kari pɛ wɔ honhom fam na ɔde akokoduru ka Onyankopɔn asɛm no, ɛnyɛ nnipa nyansapɛ, n’ankasa nsusuwii, anaa nsusuwii hunu. Ɛwom, na eyi betumi ama ebinom a wonni adwempa asɔre atia no. (2 Timoteo 1:6-8; 2:1-3, 23-26; 3:14, 15) Nanso, sɛ na Timoteo di Paulo afotu akyi a, na ɔbɛkɔ so ayɛ ɔfasu asiw ɔwae kwan, sɛnea na Paulo ankasa ayɛ no.—Asomafo no Nnwuma 20:25-32.
So Paulo nsɛm a ɛfa asɛnka ho no fa asɛm a wɔka wɔ asafo no akyi no nso ho? Yiw, ɛfa ho, sɛnea nsɛm a ɛfa asɛm no ho da no adi no. Paulo kɔ so ka sɛ: “Na wo de, ma w’ani nna hɔ ade nyinaa mu, mia w’ani hu amane, yɛ ɔsɛmpakafo adwuma, wie wo som no koraa.” (2 Timoteo 4:5) Asɛnka adwuma—asɛmpa no a wɔka kyerɛ wɔn a wonnye nni no—yɛ Kristofo som adwuma no fã titiriw. (Mateo 24:14; 28:19, 20) Na sɛnea wɔka Onyankopɔn asɛm wɔ asafo no mu wɔ ‘ɛbere a enye’ mpo mu no, saa ara na yɛkɔ so ka asɛm no kyerɛ wɔn a wɔwɔ asafo no akyi wɔ tebea horow a emu yɛ den mu.—1 Tesalonikafo 1:6.
Onyankopɔn Asɛm a efi honhom mu no so na yegyina yɛ yɛn asɛnka ne ɔkyerɛkyerɛ adwuma no nyinaa. Yɛwɔ Bible mu ahotoso koraa. Paulo ka kyerɛɛ Timoteo sɛ: “Kyerɛw nyinaa fi Nyankopɔn home mu, na eye ma ɔkyerɛkyerɛ, ntɛnyi, nteɛso ne trenee mu yɛn.” (2 Timoteo 3:16) Yɛtaa de adwempa fa saa nsɛm no ka de kyerɛ sɛ Bible no yɛ Onyankopɔn Asɛm a efi honhom mu. Nanso, atirimpɔw bɛn nti na Paulo kyerɛwee?
Ná Paulo rekasa akyerɛ ɔpanyin bi, obi a na ɔwɔ asɛyɛde sɛ ‘oyi ntɛn, toto nneɛma yiye, na ɔde nteɛso ma wɔ trenee mu’ wɔ asafo no mu. Enti, na ɔrekae Timoteo sɛ ɔmfa ne ho nto nyansa a ɛwɔ Asɛm a efi honhom mu a na wɔde akyerɛkyerɛ Timoteo fi ne mmofraase mu no so. Te sɛ Timoteo no, ɛtɔ mmere bi a, ɛsɛ sɛ mpanyimfo ka nnebɔneyɛfo anim. Bere a wɔreyɛ saa no, ɛsɛ sɛ wɔde wɔn ho to Bible no so bere nyinaa. Afei nso, esiane sɛ Kyerɛwnsɛm no fi Onyankopɔn home mu nti, nkaanim a egyina so nyinaa yɛ nkaanim a efi Onyankopɔn hɔ. Ɛnyɛ nnipa nsusuwii bi na obi a ɔpo nkaanim a egyina Bible so no po, na mmom honhom fam afotu a efi Yehowa ankasa hɔ.
Hwɛ sɛnea Onyankopɔn nyansa da adi kɛse wɔ Timoteo Nhoma a Ɛto so Abien no mu! Na hwɛ mfaso pii a ɛwɔ so sɛ yebegyina nsɛm a ɛfa asɛm no ho so asusuw emu afotu ho! Wɔ asɛm yi mu no, nsɛm a ɛyɛ anigye a efi honhom mu a ɛwɔ nhoma yi fã ketewaa bi pɛ na yɛasusuw ho, nanso ɛdɔɔso sɛ ɛbɛma yɛahu sɛnea mfaso wɔ so sɛ yebegyina nsɛm a ɛfa nea yɛkenkan ho so asusuw Bible mu nsɛm a yɛkenkan no ho. Ɛno bɛboa ma yɛahu ankasa sɛ ‘yekura nokwasɛm no mu pɛpɛɛpɛ.’
^ nky. 7 Sɛ wopɛ nsɛm foforo a, hwɛ Insight on the Scriptures, a Yehowa Adansefo tintimii no, Po 2, kratafa 1105-8.
Paulo pɛe sɛ osiesie Timoteo ma ɔbɔ asafo ahorow ho ban
Paulo kaee Timoteo sɛ ɔmfa ne ho nto nyansa a ɛwɔ Asɛm a efi honhom mu no so
Share Share Dɛn Na Ebetumi Aboa Yɛn Ma Yɛakura Nokwasɛm No mu Pɛpɛɛpɛ?
w03 1/1 kr. 27-30
‘Onyankopɔn, Adɛn Nti na Womaa Eyi Too Me?’
Awerɛkyekye Wɔ Hɔ Ma Wɔn a Wohu Amane No
Ɛnnɛ Ne Bere A Ɛsɛ Sɛ Yɛwɛn Sen Biara!
“Monkɔ So Nwɛn”!
Krataa A Ɛsesaa M’asetra
Onyaa Ne Boasetɔ So Akatua
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM January 1, 2003
Share Share ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM January 1, 2003
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM January 1, 2003